SIDEE LOOLA TACAALI KARAA KIIMIKOOYINKA MEDVEDKA, IYO SIDOO KALE ISTICMAALKA AMMONIA? - BEER CAGAARAN
Taabashooyin wax ku ool ah oo ka yimaada Medvedka: kimistaanka iyo ammonia
Medvedka waa cayayaan aad u xun oo dhulka ku dhex nool, waxaana lagu kala saaraa fara badan. Dumarku waxay awoodaan in ay dhigaan ilaa 400 ukumo waqti.
Dadka ku nool xuubka ayaa sababi kara waxyeelo weyn. inta badan dhirta beerta, ubaxa iyo nalalka, duurka strawberry iyo strawberries.
Waxay kaliya ma cuno dhirta, laakiin waxay sidoo kale jarjartaa dhuuban khafiif ah oo ah sabuurad iyada oo cirridkeeda.
Sariiraha leh abuurka kaliya ee beeraha, cayayaanku waxay jebinayaan marxalado badan, iyaga oo ka hortagaya jeermiska. Xaqiiqada xagjirka ah ee laga soo qaado haragga waxaa jira noocyo badan oo ah sunta kiimikada kiimikada ee burburiya dadka waaweyn iyo caruurtooda.
Waxaan soo qaadnay liiska habka ugu wax ku oolka badan ee caanka ah ee Medvedka, kuwaas oo loo balan qaaday inuu beertaada ka badbaadiyo cilladda, iyada oo aan waxyeello dhirta.
Qaar badan oo bannaanka u khibrad leh ayaa la dagaalamaya Medvedka iyagoo isticmaalaya ammonia (biyaha ammonia). Intaa waxaa dheer, ammonia waa bacriminta nitrogenous fiican.
Foomka la sii daayo
Xalka aqueous ee caagagga caag ah ama dhalooyinka.
Ammonium hydroxide - 30% xoojinta.
Ammonia waa daaweyn loogu talagalay medvedka, taas oo leh ur aan fiicnayn, taasina waxay ku celisaa cayayaanka waxyeellada leh.
Aad u gaaban, urka si dhakhso ah ayuu u baxaa. Sidaa darteed, hordhacku waa lagama maarmaan ugu yaraan toddobaadkii hal mar.
U sinaanta daawooyinka kale
Ammonia oo ka soo horjeeda waa in aan lagu darin lures, taas oo soo jiidata dareenka by urkooda.
Goorma ayaad dalbaneysaa?
Wakhti kasta oo dhir ah inta lagu jiro waraabinta.
Habka loo isticmaalo
Ku rid 3-4 koobyo macmacaan oo biyo ah ammonia baaldi biyo ah, walaaq iyo biyo dhirta hoostiisa.
Daroogadu waa sun badan dadka iyo dhammaan xayawaanka diiran - dhiigbaxa 2aad.
Dhibaatadani waxay ka soo horjeedaa daawooyinka waxyeellada badan ee saameynta badan ee cayayaanka ee carrada.
Daroogada la isku halleyn karo oo la xaqiijiyey, ayaa loo ballanqaaday in la baabi'iyo curyaanka.
Gaaska ayaa lagu rakibay baako aan biyuhu lahayn. Ammaanka 100g.
Walaxda ugu muhiimsan waa diazinon qiyaasta 40g / l.
Noocyada Neurotoxic waxay horseedi karaan curyaanimo ee xagjirnimada. Tani waxay u sabab u tahay xannibidda unugyada cholinesterase enzyme.oo ku lug leh gudbinta dareen-celinta nidaamka dareenka.
Enzyme waa ineey keentaa hiddo-galeetada bilaashka ah ee acetylcholine, taas oo ka bilaabmaysa inay ku ururto furitaanka synaptic, taasoo ka dhexjirta marxaladda dushooda.
Siyaabaha loo galo jirka - xiidmaha, nidaamka iyo xidhiidhka. Haddii aad si joogto ah u isticmaashid daroogada, waxaad heli kartaa dareen, adkeysi horey u soo marisay saameynteeda.
Wakhtiga ilaalinta dhirta laga bilaabo xarku wuxuu socdaa ugu yaraan 13-15 maalmood. Waqtigaan, diazinon si tartiib tartiib ah ayaa geedka loo mariyaa nidaamka xididka.
Diazinon si fiican ayay u socotaa iyada oo la cuno herbicides iyo fungicides. Emulsion Biyaha waxaa si firfircoon loogu isticmaalaa isku dhafka taangiyada.
Waxaa macquul ah in la sameeyo cayayaanka ka hor inta roobka. Xaaladaha kale ee cimiladu ma ciyaaraan door gaar ah.. Granules waxaa la soo saaraa marka la beero dhirta iyo ka dibna xilliga wax soo kordhaya.
Ka reeban waa strawberries iyo strawberries - diyaargarowga loogu talagalay ilaalinta waxaa la dhigay in ciidda ka dib goosashada.
Granules Terradox waxaa loogu talagalay in lagu dabaqo ciidda. Si toos ah ee sariiraha beerta ama inta u dhaxaysa safafka ay qaylinayaan ama grooves leh qoto dheer oo ah 2-4cm, kaas oo granules insecticidal la meeleeyays.
10-25 g of daroogada ayaa la cunay 10 mitir oo laba jibbaaran. Xilliga xagaaga, waxaad samayn kartaa 2 daaweyn leh nasasho 2 bilood ah.
Terradox waxaa loo kala qaybiyaa halis darajo 3 ah, sida daroogada oo hoos u dhigta xayawaanka, shinnida iyo dadka.
Insectoacaricide isku dhafan ee loo isticmaalo burburinta cayayaanka ee dhulka. Waxay leedahay saameyn aad u ballaadhan.
Dufanka qashinka, ku duuban dhalooyinka 100 iyo 20 ml iyo 5 ml ampoules.
Bifenthrin, sida pyrethroids kale, carqaladeeya isweydaarsiga sodium iyo kalsiyum. Imidacloprid wuxuu hoos u dhigaa furitaanka kanaalka sodium waxayna joojisaa dhaqdhaqaaqa enzymes ee ku lug leh soo gudbinta dareen-celinta qulqulka.
Sidaa darteed, hawsha caadiga ah ee habdhiska dareemayaasha ayaa si degdeg ah looga joojiyey labada dhinac. Cayayaanka, waxaa jira qallafsanaan xoog leh, gariir iyo qalalaaso, u boodboodo oo barbardhigaya, natiijo ahaanna, dhimasho.
Daroogadu waa nidaam, Gali jidhka adoo isticmaalaya marin habaabinta iyo mindhicirka. Suurtagalnimada in koritaanka iska caabbintu aad u yar tahay.
Waxqabadka waa la damaanad qaadayaa inuu socdo 15-18 maalmood. Kala soocid buuxda ee macnaheedu wuxuu dhacaa 45 maalmood kadib.
Isku dar maaddooyinka fungicidal.
Xaaladaha cimiladu ma saameynayaan waxtarnimada daroogada. Isticmaalidda macnihiisu marka roob la soo dhaweeyo.
Sidee loo sameeyaa baasto?
Saldhigga waa la kariyay oo la kariyey - qoryaha lafaha, digir, galley, masago. Boorashka waa inuu noqdaa mid liqay oo si wacan loo kariyo.
Vofatoks (20 ml) waxaa lagu shubay qadar yar oo biyo ah (100 ml) iyo walaaq ilaa nabarka si dhammaystiran loo kala diro. Xalka waxaa ka buuxsamaya 1 kg oo booris ah isla markaana si fiican isku daraan. Qiyaas ahaan nus saac waa isku-dhafka keligiis ayaa looga tagay si uu u saxo.
Isla markiiba isticmaalka, saliida saliidda leh ee la safeeyey ayaa lagu daraa qadida qadar 40-50 ml ah oo mar labaad isku dhafan. Waxaad ku keydin kartaa isku darka meel qabow muddo aan ka badnayn 3 maalmood.
Xayeysiinta la diyaariyey ayaa la dhigay hareeraha geedo lagu beeray carrada qoyan iyo daboolay lakabka yar ee carrada si aan u soo jiidin shimbiraha.
Daroogadu waa sun aad u sunta jiirka iyo jiirarka, si dhexdhexaad ah shimbiraha oo aan ku filnayn bini-aadanka - 3 halis oo khatar ah.
Daawo waxtar leh oo loogu talagalay Medvedka, dawo khaas ah oo ammaan ah oo aan ku jirin kiimikooyin sun ah. Waxaa loo adeegsadaa si loola dagaallamo qurxinta maqaarka iyo beerta.
Goob caga midab leh. Ku xiran baakado aan biyuhu lahayn oo leh awood 100 iyo 200 g.
Boric acid, ka dib marka la galo nidaamka dheefshiidka, wuxuu burburiyaa xuubka mindhicirka iyo dheellitirka biyaha, oo keena fuuqbax. Kerosene ayaa shaqeynaya hawada neefta.
Daroogadu waxay shaqaysaa 10-14 maalmood.
Waxaa si weyn loola dhaqmaa daawooyinka ugu caansan.
Daaweynta kowaad waa in la bilaabo ka hor beerashada iyo beerashada abuurka sariiraha. Ku celcelin - sida loo baahdo, laakiin gaar ahaan inta lagu jiro taranka dhirta. Xaaladaha cimiladu muhiim maaha.
Daawada waxaa lagu qeexay dhaqdhaqaaqa horay loo soo qoday ee Medvedka ama u diyaar garoobka iyo godadka sariiraha, godadka iyo safafka. Qaddarka lagu taliyey - 3-4g (1/2 qaado shaah) meel kasta oo mitir ah. Soodajinta qoto dheer - 2-4 cm.
Rembek waxaa loo tixgeliyaa heerka 3aad ee khatarta dadka iyo xayawaanka - Awooda qatarta ah ee sunta.
Iftiin waxtar leh midab-kala-sooca cayayaanka, loogu talagalay burburinta cayayaanka ku nool carrada. Kuwaas waxaa ka mid ah Medvedki, dirxiga Khrushchev, wireworms.
Dawadani waxay ka timaadaa dhirta - granules ee casaan iyo cagaaran, oo lagu rakibay bacaha biyuhu aanay lahayn. Miisaanka - 100 g
Maaddada ugu muhiimsan waa Malathion 50 g / kg.
Marka uu jirku jiro cayayaanka, Malathion waxaa loo beddelaa walax dhaqameed oo leh awood aad u sarreysa.
Iyada oo la isticmaalo lacag badan cayayaanka waxay bilaabaan inay sameeyaan caabbinta malawadka. Jidhka cayayaanka noocan oo kale ah ayaa keena awooda lagu burburinayo kiimikada, isaga oo u rogaya unug aan sun ahayn.
Dhimashadu waxay dhacdaa 3 saacadood ka dib marka la qaato daroogada oo ku jirta jirkaaga. Muddada hawsha sumoobidda waa ilaa 20 maalmood ka dib meelaynta dhulka.
Malathion, oo ka mid ah xeryahooda kale ee organophosphorus, waxaa si fiican u la mid ah inta badan cayayaanka la og yahay iyo fungicides.
Gubashada ugu horeysa ee granules soo saaray 8-10 maalmood ka hor beerto iyo abuurka abuur ee ciidda qoyan. Waxaa lagugula talinayaa inaad sameysid habka ka dambeeya roobka ama wax yar ka hor inta uusan bilaaban.
Sunta ka timaadda cirridka ayaa la dhigayaa grooves ama pits ilaa 5 cm qoto dheer, meelaynta jarista meelaha meelaha aadka u dhaadheer ee Medvedka - tuubbooyinka digada iyo compost, sariiraha iyo godadka, walaaqka, dogobka geedka. Qeybta kor ku xusan waxaa la qariyaa dhulka. Heerka isticmaalka - 6-10g mitir kasta.
Dhibaatooyinka waxaa loola jeedaa wakiilo dhexdhexaad ah ayaa ka mid ah fasalka 3aad ee khatarta dadka, naasaha iyo shimbiraha.
Ma aha waqti dheer ka hor, beeralayda baaritaanka ayaa ogaaday in Regent, kan loogu talagalay in lagu burburiyo lamaanaha ColoradoWaxay sidoo kale waxtar u tahay cirridka.
Bait waxaa laga sameeyey qamadi la kariyey (1-1, kg), kaas oo la kulmay waxyaabaha ku jira hal xirmo oo ah Regent. 3-4 malqacadood oo saliid ah gabbaldayaha ayaa lagu daraa isku dar ah, tan oo dhan si fiican isku dhafan oo loo dhigo on sariiraha, khafiif ah budada leh ciidda.